Saddex arrimood oo ku saabsan khilaafka NISA iyo Wasaarada Amniga ee garoonka Aadan Cadde | Warbaahinta Ayaamaha
Saddex arrimood oo ku saabsan khilaafka NISA iyo Wasaarada Amniga ee garoonka Aadan Cadde
Tan iyo markii uu horaantii bishan Wasiirka Amniga Soomaaliya ku amray taliska hay’adda Nabad sugidda iyo Sirdoonka Qaranka inay ciidamadooda ka saaraan garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Aadan Cabdulle, waxaa soo baxayay su’aalo la iska weydiinayo arrimahaas.
Hadal-heynta shacabka ayaa u badneyd saameynta ay NISA ku leeyihiin garoonka iyo waxa ay yihiin shaqooyinka ay ka hayaan.
Marka laga yimaado eedeymaha farogalinta siyaasadda ee sida joogtada ah loogu jeediyo NISA, waxa inta badan la isku raacsanyahay in ay hayaan hawlo sugista amniga ah oo muhiim u ah goobaha waaweyn ee dowladda, sida Garoonka Diyaaradaha Caalamiga ah ee Aadan Cabdulle Cusmaan.
Waxaan eegi doonnaa saddex qodob oo sharraxaad ka bixinaya su’aalaha ugu waaweyn ee ku gadaaman hay’adda NISA iyo garoonka Aadan Cabdulle.
1- Xafiiska NISA ee garoonka
Sida caadiga ah, safar hay’adood oo aysan ku jirin sirdoonka ayaa shaqo ku leh arrimaha ugu waaweyn ee ku saabsan garoonka diyaaradaha, kuwaasoo kala ah:
Muddo dhowr sano ahba amniga garoonka diyaaradaha Aadan Cabdulle ee magaalada Muqdisho waxa uu ku tiirsanaa hay’adda Nabad Sugidda iyo Sirdoonka Qaranka, taas oo dabcan la xiriirta duruufaha amniga u gaarka ah ee Soomaaliya oo u baahan wax ka badan hawlaha caadiga ah ee booliiska.
NISA ayaa xafiis ku leh garoonka gudihiisa, kaasoo ujeeddadiisu ay markii ugu horreysay ahayd in loo adeegsado howlaha amniga ee ay halkaas ka waddo hay’addu, sida uu qabo Xuseen Macalin oo mar ahaa la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha.
Hase yeeshee, warar soo baxay ayaa sheegayay in saameynta NISA ee garoonka ay noqotay mid ka taloowsan howlaha amniga. Arrimahaas ayaa la rumeysan yahay inay ugu dambeyn sabab u noqdeen go’aankii uu wasiirka Amniga, Cabdullaahi Maxamed Nuur ugu amray taliyaha NISA, Yaasiin Cabdullaahi Fareey, inuu ciidamada NISA gebi ahaanba ka saaro garoonka.
Wasiirka ayaa markii dambe sheegay in amarkaas uusan khuseynin ciidanka hay’adda nabad sugidda ka tirsan ee ilaaliya baraha koontaroolka ee laga galo garoonka.
Xuseen Macallin Maxamuud oo ah la taliyihii hore ee dhinaca amniga u qaabilsanaa madaxweynaha Soomaaliya ayaa BBC-da u sheegay in aysan khasab ahayn joogitaanka NISA ee garoonka, amnigiisana ay tahay shaqada booliska balse xafiiskooda uu ahaan karo mid ku yaalla meesha oo qaabilsan shaqooyinkii u cayinnaa sirdoonka.
2- Goob gaar ah oo ay ka baxaan madaxda NISA iyo dadka ay iyada ka warhayso
Dhowr sanoba waxaa jiray warar la isla dhex maro oo sheegayay in NISA ay garoonka diyaaradaha ku leeyihiin Terminal ama qayb isticmaal oo iyaga gaar ah, cid kalena aysan u adeegsanin soo gelitaanka iyo bixitaanka.
Balse la taliyihii hore ee amniga u qaabilsanaa madaxweynaha ayaa sheegay in aysan jirin waxyaabo si rasmi ah looga warhayo oo ku saabsan arrintaas.
“Waan aragnay Terminal dhisan laakiin qaabka ay ugu shaqeeyaan waa wax aan wali rasmi ahayn oo hacabka lala wadaagin, haddii ay jirtana wax sax ah ma aha,” ayuu yiri.
3- Maxay tahay danta ugu jirta NISA inay garoonka joogaan?
“Waa meel doorashooyinkii lagu qabanayo oo ilaa madaxweyneyaasha lagu doorto, waa meel dadka siyaasadda isdiiddan kala aaminsan ay ka dhoofaan kana soo dagaan, oo la rabo in lagu caburiyo ama lagu fududeysto.
Aragtiyo kala duwan ayaa la hadal hayaa oo ku saabsan danta ay NISA u joogto garoonka, dadka qaarna waxayba farta ku fiiqayaan in ay jiraan sababo siyaasadeed.
Bishii July ee sanadkii 2021-kii, Ra’isulwasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa xilkii ka qaaday Cabdullaahi Kulane oo ahaa agaasimihii shaqaalaha NISA kadib markii siyaasiyiin ay sheegeen in laga celiyay in ay ka dhoofaan garoonka Aadan Cadde, waxana dadkaasi ka mid ah Cusmaan Nuur Macalimu oo mar ah guddoomiyaha gobolka Gedo.
Waxaa jiray warar ka hadlayay in garoonka la dhigay liis dad aanan la doonaynin in ay ka dhoofaan garoonka sababo siyaasadeed awgeed.